Isbedalka DDSI iyo waxyaabaha dahsoon ee ku xeeran (Qormo Xasaasi Ah)!.WQ.Caalim – Idil News
Fallanqeyntaan kooban ayaa jeclahay inaan wax yar kaga iraahdo isbedallada siyaasadeed ee hareeyay dalka Itoobiya, gaar ahaanna arrinta Qawmiyada somaliada
Sida ifafaalaha wax u socdaan laga kororsan karo waxaa weeye in Itoobiyada maanta ay heyso dhabbe colaado daba dheeraan kara kuwaasoo ka dhaca gudaha dalkaasi. Waxaa soo muuqdey astaan cabsi leh. Marka aad daawato waxa ka socda magaalada jigniga.
Taariikhda Itoobiya, marka dib loo raaco durba waxaa fahmi karaynaa in dagaal dhaca joojintiisa ay aad u adag tahay sababtoo ah colaadda qowmiyaddaha ma ahan wax si sahal ah lagu dhamayn karayo.
Dadyoowga qaar ayaa siyaabo kale duwan ku macneynaya arrinka siyaasadaysan kaasoo suntan arrinka Shidaalka.
Su’aasha isweydiinta mudan waxaa weeye, xukuumadda Abiy Ahmed ma waxay ciqaabeysaa Cabdi Maxamuud Cumar kaliya mise dhammaan dadkii xukunka Tigreega iyo Amxaarada gaboodfallada ku geystay mise Tigreega waa laga baqayaa, oo hubka iyo dhaqaalaha ay ka gurteen Itoobiya ayaan lagu maagi karin haatan?
Dhowr caqabado oo xalkoodu berri adkaan karo ayaa ka dhalanaya sida ay wax u socdaan marka laga eego waxaana weeye:
5- In kooxo diimeedyo hubeysan ay ka dillaacaan gudaha Itoobiya taasoo dhalinaysa amni darro wadanka oo dhan.
Sababtu waxaa weeye haddaanan xal loo helin saameynta ka dhalan karta waa ay soo gaaraysa gudaha Soomaaliya.
Waxaa qoray: Danjire Hore Maxamed Maxamuud Nuur (Caalim), ah aqoonyahan iyo siyaasi darsa siyaasadda waddamada gobolkani Afrika, islamarkaana ku nool dalka Finland.